बालुवाटारमा ओलीसँग रिसाए प्रचण्ड, के भने ? « Light Nepal
बालुवाटारमा ओलीसँग रिसाए प्रचण्ड, के भने ?
काठमाडौं, ४ बैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको एकलौटी गरेको सचिव सरुवाको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । पार्टी एकता संयोजन समितिको मंगलबारको बैठकमा बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले ओलीलाई यस विषयमा खरो प्रश्न तेर्साएका थिए ।
बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेकोदेखि सचिव सरुवासम्म असन्तुष्टि जनाए ।
प्रचण्डले माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएपछि आफूहरुलाई थाहा नै नदिई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सचिव सरुवाबारे पनि माओवादी मन्त्रीहरुसँग परामर्श नै नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रचण्डले भने, ‘यो कार्यशैली हो भने त दुई वटा अध्यक्ष बनाएपनि एउटा कार्यकारी, अर्को शेरेमोनियल त हुँदैन ?’
जवाफमा ओलीले आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । केन्द्रीय समितिको भागवण्डा विवादमा उनले ‘समान पनि नभनौं, प्रतिशत पनि नभनौं, आवश्यकताका आधारमा गरौं’ भनेको एक नेताले बताए ।
माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले मैले त्यस्तो केही गरेको छैन । एउटा कार्यकारी एउटा शेरेमोनियल कहाँ हुन्छ र भन्नु भएको छ ।’